मेलम्ची बाढीमा हेलम्बुदेखि २२ किलोमिटर बगेको गर्भिणी भैँसीको सुखान्त कथा (भिडियो) | Ratopati
personशम्भु दंगाल exploreकाठमाडौं access_timeअसार ६, २०७८ chat_bubble_outline0
असार २ गते दिउँसो सिन्धुपाल्चोकको चनौटेमा मेलम्ची बाढीमा बगिरहेको एउटा भैँसी देखियो । तर खोलाको बाढीमा बग्दै गरेको भैँसीलाई उद्धार गर्न कोही जान सक्ने अवस्था थिएन ।
सिन्धुपाल्चोकको चनौंटे क्षेत्रमा भिडियोमा कैद भएको भैँसी हेलम्बु गाउँपालिका वडा नं. २ किउल भन्ने ठाउँबाट बगेको थियो । किउलबाट चनौटे, ग्याल्थुम, तालामाराङ्, मेलम्ची, बाहुनेपाटी, हुँदै काभ्रेको सीमा छेउ फड्केश्वरमा पुगेको थियो ।
इन्द्रवती नदीले बगाउँदै ल्याएको भँैसी सोहीदिन साँझतिर १६ वर्षका रोमन कार्की र १८ वर्षका धनबहादुर तामाङले काभ्रेपलाञ्चोकको सिमाछेउ उद्धार गरे ।
मेलम्ची नगरपालिकाको पशु शाखामा कार्यरत भेटनरी प्राविधिक चेतप्रसाद घोरासैनीले पनि मेलम्चीमा भैँसी जिउदै बगिरहेको देखे । उनी मेलम्ची भन्दा माथिको गाउँमा भैँसी बिरामी भएकोले उपचारका लागि गएका थिए । उनी आफ्नो घर फड्केश्वर आइपुग्दा फड्केश्वरमा रोमन कार्की र धनबहादुर तामाङले उद्धार गरिसकेका थिए ।
भैँसीको उद्धार गर्नेहरुले पशु प्राविधिक घोरासैनीलाई फोन गरेर भैँसीको रगत बगिरहेको छ, खुट्टा सुन्निएको छ, घाउ नै घाउ छ भन्दै उपचारका लागि बोलाए ।
घोरासैनीले भैँसीको घाउ सफा गरेर एन्टिबायोटिक औषधी दिए । खोलाबाट झन्डै १० मिनेट हिँडाएर एउटो गोठमा भैँसी राखियो ।
उनले भने–‘भैँसी ब्याउने छ । दाम्लो नथीसहित छ हैन सर भनेर भन्नुभयो । उहाँहरु यहाँ आएपछि भैँसीले पनि चिनिहाल्यो । जो कोही मान्छेले मेरो भैँसी हो भनेर आउने हो कि भन्ने डर थियो तर भैँसीले नै उहाँलाई चिनेपछि डर भएन ।’
अरु मान्छेसँग डराइरहेको भैँसी आफ्नो धनीलाई भेटेपछि शान्त बनेको थियो । पशु प्राविधिक घोरासैनीले ४५ सय रुपैयाँ हाराहारीको व्यक्तिगत औषधी उपचारमा प्रयोग भएको र आफूले निःशुल्क उपचार गरिदिएको रातोपाटीलाई बताए ।
हेलम्बु गाउँपालिका वडा नं. ६ किउल स्थित हेलम्बु गाउँपालिका कार्यालय, बाढीले भत्काएको प्रहरी कार्यालय र तारा शिवभक्तिको घर ठीक वारीपारी थियो । उनको घर र गोठ बाढीले बगाएर अहिले बगर भएको छ ।
उनले भने, ‘असार १ गते घर गोठ भएको ठाउँमा लेदो बाढी पसेर जान नसक्ने स्थिति बन्यो । असार २ गते बिहानैदेखि हामी भैँसी भएको ठाउँमा जान प्रयास गरे पनि सक्ने स्थिति बनेन । भैँसीलाई हामीले हेर्ने र भैँसीले हामीलाई हेर्ने अवस्था मात्र भयो । दिउँसो साढे २ बजेतिर ह्वात्त बाढी आयो र भैँसीलाई लिएर गयो । हामीले आँखाले देख्नेजतिसम्म हेरिरह्यौँ । तल्लो भागमा बस्ने मान्छेहरुले पनि भैँसी खोलाले लगिरहेको छ, मरिसकेको छैन् भनिरहेका थिए । त्यति ठूलो बाढीमा परेको भैँसी हामीले त यसरी बाँच्ला भनेर कल्पना नै गरेका थिएनौँ । माया मारिसकेका थियौँ ।’
भीषण बाढीको भंगालोमा परेको भैँसी फट्केश्वरको एउटा गोठमा देख्दा तारा शिवभक्ति आश्चर्य चकित भए । उनी पुग्नेवित्तिकै भैँसीले आफूलाई चिनेको व्यवहार देखाइहाल्यो । उनले भने–‘अरु मान्छेसँग डराइरहेको भैँसी हामी पुग्नेबित्तिकै डराउन छोड्यो । यहाँ भेटेनरीको सरले सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गराउनुभयो । उपचारमा ५० हजार रुपैयाँ लागेपनि पैसा लिन्न भन्नुभएको छ । खुट्टा सुन्निएको रहेछ । अहिले घाउहरू सुक्न थालेको छ ।’
हेलम्बुदेखि बाढीमा बगाएको गभिर्णी भैँसी काभ्रेको सिमाछेउ पुग्दापनि जिवित भेटिँदा स्थानीयले आश्चर्य मानेका छन् । भैँसी त भेटियो तर घर गोठ गुमाएका उनलाई अर्को गोठ बनाउनुपर्नेछ ।
उनले भने–‘भूकम्पछि पाखोबारीमा कमाइ लगाउन छोडेका थियौँ । अहिले हामी त्यही बारीमा बसेका छौँ । अब त्यही बारीमा दुई चार पाता जस्ता ओढाएर गोठ बनाएर राख्छौँ ।’
तर, भैँसी भेटाएर खुसी भएपनि गाउँमा कसरी पुर्याउने भन्ने अर्को चिन्ता थपियो । घाइते भैँसीलाई ५ घण्टा हिँडाएर लैजान पनि गाह्रो । नयाँ ठाउँमा पाल्न पनि समस्या ।
उनले भने, ‘यही असार ९ गते भैँसीको दिन पुग्दैछ । भैँसी यहीँ ब्यायो भने दश पन्ध्र दिन यतै बस्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ नयाँ नौलो ठाउँमा हामीलाई बस्न पनि गाह्रो छ । घाँस कताबाट ल्याउनु, खोले कसरी खुवाउनु । स्याहार सुसार गर्न सकिँदैन । घरमा लान पाए त छिमेकीहरूसँग सहयोग मागेर केही गर्न सकिन्थ्यो । सकेसम्म आजभोलि नै लैजान पाए हुन्थ्यो ।’
गाडीमा भैँसी चढाइदिएर फड्केश्वरका स्थानीयले तारा शिवभक्तिका बाबुछोरालाई बिदा गरेका छन् । मेलम्चीसम्म गाडीमा लगेर त्यहाँबाट भैँसीलाई बिस्तारै गाउँ पु¥याउने उनीहरुको योजना छ